Lipostabil - Ziva zvazviri, zvinobatsira uye kana zvakaipa kune hutano hwako!
kuonda	 23 January 2019
Pakati pemaitiro akasiyana siyana anoyevedza muBrazil, nyika inoshandisa kuvhiya kwepurasitiki zvakanyanya, zvishoma zvinotaurwa nezvekushandiswa kwejekiseni. Lipostabil, zita rekutengesa re lipoprotein phosphatidylcholine.
Muchikamu chino, tichataura zvishoma nezvekushandisa kwechirwere ichi, mhedzisiro yaro uye maitiro akashata. Lipostabil inoshanda here? Ngationei zvese pano, ramba uchiverenga!
Chii chinonzi Lipostabil?
Sezvambotaurwa pamusoro apa, Lipostabil ndiro zita rekutengeserana rakapihwa phosphatidylcholine, iro rinowanikwa mune membrane yesero uye rinobatsira kubviswa kwemafuta epamhepo, nekuti basa rayo guru nderekubatsira membrane kushanda uye kuita pamwe ne enzymes lipases, ayo ari enzymes izvo zvinoputsa mafuta.
Iyi lipoprotein inoitisa basa rekubvisa mafuta kubva mumasero uye kugadzirisa ayo kuitazve nemuviri, kuushandura kuita simba. Nekuda kweizvi, Lipostabil yakatanga kuve nekushandisa kwayo yakanangana ne aesthetics, mairi inoshandiswa mumatunhu anounganidza mafuta enzvimbo.
Uku kushandiswa kwave kuve kwakakurumbira zvakanyanya nekuti zvinoita sekupomba mafuta, asi zvakadzikira zvakanyanya uye hakudi kushandiswa kweanesthesia, mukuwedzera pakuratidza mhedzisiro inokurumidza kune avo vane mashoma mafuta akachengetwa.
Mushonga uyu wakatanga kugadzirirwa kurapwa kwemafuta embolism (chirwere mune kuunganidzwa kwemabhuru madiki emafuta mukutenderera, izvo zvinogona kukonzeresa matambudziko sekurwadziwa kwemoyo, tsinga dzakavharika uye tsinga, zvichikonzera kumbundira kwemapapu). Zvisinei, muBrazil, National Health Surveillance Agency (ANVISA) yakarambidza kushandiswa kwekushongedza kwechinhu ichi, zvese nekuda kwemhedzisiro ine njodzi uye kushomeka kwezvidzidzo nezvekuti rudzi urwu rwekurapa runogona kukonzerei mukureba.
Parizvino zvakarambidzwa kushandisa uye kutengesa mhando iyi yemishonga munharaunda yeBrazil. Asi paInternet unogona kuwana Lipostabil yekutenga pane akati wandei mawebhusaiti.
Chii ichochi? Inoshanda sei mumuviri?
Lipostabil kuburikidza nekushandisa inonyungudutsa mashoma ekuunganidzwa kwemafuta munzvimbo dzakasiyana dzemuviri wedu, senge eyelids, pasi pechizi, mudumbu, pakati pevamwe. Kukonzera mafuta aya kushandurwa kuita simba kana kubviswa nemuviri wedu.
Ndokunge, mushonga unoshanda nekusimudzira kuburitswa kwemukati memafuta mafuta uye zvakare kunatsiridza chitarisiko chemashuga. Uye zvakare, kushandisa Lipostabil kunogona kupa mabhenefiti akadai se:
Kuderedza mwero weLDL, cholesterol yakaipa.
kudzivirira chirwere chemwoyo
Kurumidza kutsvagiswa mafuta kupisa
Kuyera kudzikisa uye kuonda
Kurapa kwezvirwere senge pulmonary embolism uye atherosclerosis.
Ziva zvakare izvo iyo Saxenda uye kuti angakubatsira sei!
Lipostabil (kutenderera) inoshandiswa sei?
Nezvinangwa zvekunaka, mashandisirwo echishoma anoitwa munzvimbo dzine kuwanda kwemafuta, senge zvidya, magaro, zvidya zvekunze, zasi kumashure uye kunyangwe munzvimbo dzinotetepa dzakadai se "chirimwa" uye maziso emaziso.
Majekiseni anogadzirwa kuburikidza neyuniti-yakanaka tsono uye mashandisiro anenge akapatsanuka 2cm. Zvirongwa zvinowanzo dzokororwa mukati memazuva gumi nemashanu kusvika makumi maviri. Izvi zvinoreva kuti kuti unyatso kuve nemhedzisiro inoonekwa, unofanirwa kudzokorora kunyorera kwezvikamu zvishoma. Nekudaro, mudiki murwere, iwo mashoma masisitimu anodikanwa kuti uwane mhedzisiro
Pane kusagadzikana kudiki nejekiseni pacharo uye zvakajairika kuti saiti iite tsvuku. Mushure mekushandisa, panogona kuve nekurumwa uye kuzvimba, kuwedzera pakurwadziwa munzvimbo inoenderera kweinopfuura zuva.
Ndeipi mhedzisiro yemushonga?
Pakati peanowanzoitika maitiro akashata eLipostabil ndeaya:
Marwadzo panzvimbo yekushandisa
Mucosal achibuda ropa
Kushushikana kwepanyama uye kwepfungwa (kupfugama)
Miedzo yemhuka yakaitwa pamwe nekunyoreswa kwepasi kwephosphatidylcholine muzvikamu gumi. Mhuka zhinji dzakafa kubva mukukanganisa kwakanyanya, uye bvunzo dzakaratidza shanduko yehupenyu mukushanda kwechiropa.
Kunyangwe iko kwekushandisa kuchida kwechigadzirwa huturu hauna kuratidzwa, mune yekushandisa subcutaneous hapana zvidzidzo zvakakwana pamusoro pekuchengetedzwa kweiyi nzira, iyo inozivisa nezve kudiwa kwakanyanya kwemazano ekurapa pakushandisa kwechirwere ichi.
Zano: Verenga zvimwe zvirimo mune zvinyorwa nezve kuda kudya zvinodzvinyirira!
Iko kune Lipostabil muhwendefa (capsules)?
Unogona kuwana Lipostabil mufomu yepiritsi. Inotengeswa muchimiro chePhosphatidylcholine, inouya muhombodo ine 60 capsules e420mg. Iwe unogona zvakare kuwana dzimwe shanduro painternet.
Yake yakaipa? Ndezvipi zvinopesana?
Kana ikasashandiswa nenzira kwayo, mushonga unogona kukuvadza muviri wako. Iyo yekurapa inogona zvakare kuburitsa mimwe mhedzisiro, iyo yatataura pamusoro.
Kurapa neLipostabil hakufanirwe kuitwa ne:
Vanhu vane matambudziko ekugwamba
Vanhu allergic kune soy
Vanhu vane matambudziko echiropa
Vanhu vanogara vachishandisa imwe mishonga
Vanhu vane hypersensitivity.
Kwokutenga kupi? Zvingani?
Kunyangwe nekurambidzwa kwaAnvisa kushandiswa uye kutengeswa kweLipostabil muBrazil, unogona kuwana mushonga uyu pane mamwe mawebhusaiti. Kazhinji mutengo wechigadzirwa unosiyana zvichienderana nekuwanda uye ma ampoules, asi bhokisi riine mashanu ampoules e5ml imwe neimwe ine mutengo wepakati weR $ 5.
Mushure mezvose, zvinonyatsoshanda here? Ndichaonda?
Sezvatato taura muchinyorwa chino, chigadzirwa hachisi mushonga unoshanda zvakananga pakurasikirwa nehuremu, hunongoshanda pane kudzikisira mafuta munzvimbo.
Asi Lipostabil inogona kubatsira kupisa mafuta ari mukati memasero edu, zvichiita kuti vashandurwe kuita simba rinoshandiswa nemuviri wedu, nokudaro zvichipa kurasikirwa kwezviyero. Nekudaro, mhedzisiro yainogona kupa inogona kunyatsoonekwa kune vanhu vane zvishoma zvakawandisa kubvisa.
Kurudziro ndeyekuisa mari mukushandisa kwechigadzirwa pamwe nedhayeti yakaenzana uye kurovedza muviri kwemazuva ese kwemigumisiro iri nani. Uyezve tsvaga nyanzvi yehutano kuti ive nani kuongorora, uchigara uchifunga kushandisa chigadzirwa (kutenderera) nenzira kwayo.
Nzira yekumhanyisa metabolism? Dzvanya apa uye uone chinyorwa chakazara pamusoro penyaya!
Zvakasarudzika Dzimwe nzira kune Lipostabil
Kune dzimwe nzira dzechisikirwo dzinobatsira kuve nemhedzisiro yakafanana neLipostabil ine mukana wakakura wekuti haina mhedzisiro uye inogona kushandiswa pasina mushonga, sezvo zviri zvekuwedzera zvekudya zvinopa muviri mavitamini uye zvinovaka muviri zvinoda kushanda zvirinani uye nekudaro uve nemhedzisiro yaunoda.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve idzi dzimwe nzira, isu takanyora akanakisa ako ezasi. Sangana!
Quitoplan haisi yekuwedzera yekuwedzera, chirongwa chakazara chehuremu uko iwe unokwanisa kuwana mae-mabhuku nemazano ekudya, kutsiva kune hutano, chirongwa chakakwana chekudya chaunotevedzera, chirongwa chinokubatsira kudzora huremu hwako, iyo Kudya uye kushanduka kwehuremu hwako uye iwe unotogashira makapisi anobatsira kuwedzera metabolism, kuita kuti muviri upise mafuta akawanda, uye kudzivirira muviri kubva kunotora mafuta kubva pane zvaunodya.
Pawebsite yeQuitoplan yepamutemo unogona kuwana ruzivo rwese nezve ichi chigadzirwa, zvipupuriro zvechokwadi kubva kuvanhu vakakwanisa kudzikisa huremu vachishandisa, pamwe nekunzwisisa kuri nani kwemashandiro uye nei zvichiunza zvese izvi mabhenefiti.
Fomura yayo ine zvigadzirwa zvechisikigo chete uye nekudaro muviri unoita nekukurumidza mukushandisa kwayo, saka mhedzisiro yacho inokurumidza kwazvo. Zvakanakisa pane zvese, iyi isingarwadziwe nzira, sezvo iwe uchingoda chete kutora maviri maQuitoplan makapisi pazuva uye kusimudzira mhedzisiro yako nehurongwa hwekudya.
Dzvanya apa uye dzidza zvakawanda nezve Quitoplan uye kuti ingakubatsira sei!
Iwe une sarudzo yekutenga matatu emhando dzechigadzirwa kits, izvo zvinogona kukwana mwedzi mumwe, mwedzi mitatu kana super kit kwemwedzi mishanu.
Sarudza yakanakisa yechinangwa chako pazasi uye uwane mhedzisiro zvakasununguka uye pasina kukuvadza hutano hwako.
Yakadzika Carb Mapoka
Kuti uve nehuremu hune hutano uye hunoshanda zvakakosha kuti uve nechikafu chakaringana uye chakaringana. Kazhinji nguva mukumhanya kwezuva nezuva hatisi kukwanisa kuzvirongedza uye tinopedzisira tadya zvakanyanya kupfuura zvataifanira. Asi usazvidya moyo, imwe yedzakasarudzika nzira dzatakanyora pano i e-bhuku rakazara ne 101 yakaderera carb mapepa izvo zvinokubatsira kuti udzike uremu, uye uve nemuviri wawakagara uchirota nezvazvo.
Kune maresipi echikafu chako chamangwanani, masikati uye kudya kwemanheru, maswiti anonaka uye kunyange mabhonasi anoshamisa ayo achakubatsira iwe kusvika pahuremu hwako hwakanaka.
Uye zvino wakafarira chinyorwa here? Usakanganwa kusiya yako yekutaura uye ugozvigovana neshamwari dzako!
Mamota: Mukati uye kunze, ndezvipi zviratidzo, uye kurapwa kwakanyanya? Bvunza mibvunzo yako!
Chikafu chakazara mu calcium
Abdominal distension: Chii ichocho? Ndezvipi zvikonzero?
Maitiro ekuwedzera simba
Vigorexia: Chii ichocho? Ndingaziva sei? Unorapwa here?